Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Qorshaha Cusub ee Caalamiga ah ee Tobanka Sano ee Ficil ee Badbaadada Wadooyinka
Qorshuhu wuxuu dhiirigeliyaa u doodayaasha badbaadada waddooyinka si ay u yareeyaan dhimashada iyo dhaawaca waddooyinka iyada oo loo marayo wadooyin badan, oo ay ku jiraan aragti wanaagsan.
Daah-furkii dhowaa ee Qorshaha Caalamiga ah ee Tobanka Sano ee Waxqabad ee Badbaadada Waddooyinka ayaa calaamad u ah guul muhiim ah oo laga gaaray dadaallada socda si loo xaqiijiyo dhaqdhaqaaqa badbaadada leh ee dhammaan. Waxaa soo diyaariyay WHO iyo guddiyada gobollada ee Qaramada Midoobay, iyadoo lala kaashanayo ugu yaraan 140 la-hawlgalayaasheeda iskaashiga Badbaadada Waddooyinka ee Qaramada Midoobay, qorshuhu wuxuu qeexayaa habka nolosha u keenaya Qaraarka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay A/RES/74/299 ee “Hagaajinta Caalamiga Badbaadada Wadooyinka”.
Sida laga soo xigtay WHO, in ka badan 3,500 oo qof ayaa maalin kasta ku dhinta waddooyinka adduunka oo dhan - ku dhawaad ​​1.3 milyan oo dhimasho ah oo laga hortagi karo iyo 50 milyan oo dhaawac ah - taasoo ka dhigaysa dilaaga ugu horreeya ee carruurta iyo dhalinyarada adduunka oo dhan. Iyadoo aanay jirin wax faragelin ah, 13 milyan oo dhimasho ah iyo 500 milyan oo dhaawac ah ayaa la qiyaasayaa inay dhici doonaan tobanka sano ee soo socda.